एमसीसीबारे अहिले बोल्न मिल्दैन् : रावल | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
अमेरिकाले प्रष्ट रुपमा एमसीसीमा संशोधन अमान्य भनेर बोलिसक्यो नि ? अब के गर्नुहुन्छ ?
हामी त कार्यदलमा छलफल गर्दैछौं । अब कसले के भन्यो ? त्यतातर्फ जाँदैनौं । तर, यसबारेमा पनि हामी कार्यदलमा छलफल गर्छौं ।
कार्यदलमा तपाईहरुले के छलफल गरिरहनुभएको छ ?
अहिले हामीले तथ्यहरु संकलन गरिरहेका छौं । हामी छिट्टै प्रतिवेदन तयार पार्छौं । कार्यदलको समय सकिएको छ । यसबारेमा पनि कुरा हुन्छ ।
अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टमा भएको कुनैपनि प्रावधान परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखेको छ ? तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ?
यस सम्बन्धमा हामीले व्यक्तिगत रुपमा टिकाटिप्पणी नगर्ने आचारसंहिता र विधि बनाएका छौं । यी सबै विषयबारे कार्यदलमा छलफल हुन्छ । हामी एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै विषयमा कार्यदलमा छलफल गर्छौं । तथ्यमा आधारित विषयमा छलफल गर्छौं ।
अमेरिकाले दिएको अनुदान नेपालले लिने कि नलिने ? यो कुरा आज नेपाली जनतालाई बताईदिनुहोस ।
त्यो विषयमा अहिले हामीले कार्यदलमा दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्ने, तथ्यहरु केलाउने लगायतका सबै कामहरु गरिरहेका छौं । हाम्रो राष्टिय हित सर्वोपरि हुन्छ ।तदअनुरुप अघि बढ्छौं ।
कार्यदलको सदस्य बन्दैमा तपाईको मुखमा बुझो लागेको हो ?
अहिले हामी अध्ययनमा छौं । कार्यदलमा काम गरिरहेको बेलामा अहिले के के विषयमा छलफल गरिरहेका छौं भन्नेबारे भन्न चाहन्छन् । सबै विषय परीणामको रुपमा आउँछन् । कार्यदलमा कसले के भनेको छ ? भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन मिल्दैन् ।
भीम रावल अब एमसीसीको पक्षमा उभिएको हो ?
जनताले चासो राख्नु स्वभाविक हो । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि जनताले थाहा पाउँछन् । तर, म कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक रुपमा बोल्छु । अहिले त्यसमा बोल्नको लागि आचार विधिले दिँदैन् ।
विष्णु रिमालले पनि तपाईपनि अब एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ, अब पास हुन्छ भन्नुभयो नि ?
कसले के भन्छ होईन । अहिले कार्यदलमा हामी अध्ययनरत छौं । हामी समय दिएर काम गर्दछौं । सम्झौता हामीले पहिले नै अध्ययन गर्यौं । सरकारी दस्तावेजमाथि थप अध्ययन गर्दछौं । तथ्यमा आधारित भएर निश्कर्ष निकाल्छौं ।
अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ? यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले नीतिगत रुपमा म के भन्न चाहन्छु भने कुनै व्यक्तिले अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसमा कानून आकर्षित हुन्छ । सम्बन्धित निकायले त्यसमा कारबाही गर्नुपर्छ । र, त्यो कारबाही गर्दा तथ्यको आधारमा निश्पक्ष रुपमा गर्नुपर्छ । जो जो दोषी छन्, ती सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो नीतिगत धारणा छ । जहाँसम्म विषय व्यक्ति व्यक्तिको बारेमा छ, म कार्यदलमा केन्द्रित भएको हुनाले मैले ध्यान यता कार्यदलको विषयमा बढि लगाएको छु । अब यसमा कुन कुन व्यक्तिले के के गरेका थिए ? मिशिलहरुमा के छ ? अब मेरो यो काम सकिएपछिमात्रै म त्यसमा अध्ययन गर्छु । भ्रष्टाचार गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन् । कानून सबैको लागि लागु हुन्छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा निर्णय भएको कुरा हो नि यो, तर उहाँलाई कारबाही भएन ? यसमा तपाईको धारणा के हो ?
कसले के भन्छ भन्नेतिर म जान चाहन्न् । मेरो ध्यान अहिले एमसीसीको कार्यदलतिर छ । मैलै नीतिगत रुपमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु ।
चीनमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कुरा गरौं, चीनबाट आउनेहरुलाई नेपालमा आउन दिनुहुँदैन भनेर अहिले नेपालमा जनमत बढेको छ ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नो देशको नागरिक बाहिर देशमा खतरामा परेका छन् भने निजहरुलाई सुरक्षित रुपमा ल्याउने र उनीहरुको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्ने र, उनीहरुलाई राख्दाखेरि अरु आम जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव नपरोस भनेर त्यसमा ध्यान दिने काम गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै मतभेद हुन सक्दैन् । आफ्नो देशका नागरिक बाहिर अप्ठ्यारोमा पर्दा नेपाल ल्याउनै हुँदैन भन्ने कुरा कसरी हुन्छ र ?
नेपाल नागरिकहरुलाई उद्धार गर्नुपर्छ, तर चिनियाँहरुलाई चाहीँ रोक्नुपर्छ भन्ने जनमत बढ्यो भन्ने कुरा छ नि ?
पहिलो कुरा त जुन देशबाट नागरिक आउँछन्, त्यही देशले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पठाउँछ । उनीहरु स्वस्थ छन् किन छैनन् भन्ने कुरा उसले हेर्छ । हामीले पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । सीमा नाकामा पनि गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने कुनैपनि महामारीको प्रभाव पर्दैन् । यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको यही फागुण ३ गते २ वर्ष पूरा हुँदैछ ? यो सरकार कति सफल कति असफल ? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस त ?
सरकारले आफूले नै यो अवधिमा यो यो काम गर्यौं भन्छ, अनि त्यतिवेला हामी टिकाटिप्पणी गर्छौं । तर, मैले त राम्रो कामको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेको छु र कतिपय काम जुन देश र जनताको अहितमा हुने कुराको मैले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेको छु । file photo